ကိုရီးယားအဆင့်မြင့် ခြေကန်တိုက်နည်းပညာ (ဦးပြည်သိမ်း) | Thaing Wizard
This entry was posted in Hwa Rang Do, Martial Arts, Martial Arts Book and tagged စာအုပ်, ဟွရန်ဒို, ဦးပြည်သိမ်း by Aung Thu Htet. Bookmark the permalink.
5 thoughts on “ကိုရီးယားအဆင့်မြင့် ခြေကန်တိုက်နည်းပညာ (ဦးပြည်သိမ်း)”
Nge Zin on March 11, 2013 at 6:27 pm said:
can you help me to find other martial arts books by Burmese? i am very
happy to get these books from you. THANK YOU VERY MUCH
Aung Thu Htet on March 11, 2013 at 6:33 pm said:
ဟုတ်… သိုင်းနဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ စာအုပ်တွေက ဒီဘက်ခေတ်မှာ ရှားသွားပြီဗျ… စာအုပ်တွေက အသစ်လည်း မထွက်ဘူး။ အဟောင်းတွေလည်း ပြန်မထုတ်နိုင်ကြတော့ဘူး။ အဲ့တော့ သိုင်းစာအုပ်လိုချင်ရင်တော့ စာအုပ်အဟောင်းတန်းတွေမှာသာ ရှာပါဗျာ… https://thaingwizard.wordpress.com/martial-arts/myanmar/ မှာ list ထုတ်ထားတဲ့ စာအုပ်တွေကိုတော့ ကျွန်တော် တဖြည်ဖြည်းနဲ့ scan ဖတ်ပြီး တင်ပေးသွားပါ့မယ်။ အားပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါဗျာ…
Aung Kywe Moe on April 23, 2013 at 1:59 am said:
ak on May 18, 2013 at 2:11 am said: